नेपाल आज | अब निःशुल्क मिर्गौला परीक्षण ( भिडियोसहित)
अब निःशुल्क मिर्गौला परीक्षण ( भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकाबेला काठमाडौं कलंकीस्थित ‘ मार्क इन्टरनेशनल किड्नी सेन्टर’ ले निःशुल्क मिर्गौला परीक्षणको घोषणा गरेको छ ।
मार्च १२ अर्थात फागुन २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय मिर्गौला दिवसको अवसर पारेर सेन्टरले फागुन २९ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म निःशुल्क मिगौैला परीक्षण गर्ने जनाएको हो । विहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म जति पनि मानिसहरु आउँछन् उनीहरुका मिर्गौला परीक्षण गरिने बताउँछन् मिगौला रोग विशेषज्ञ डा. अर्चनशम्शे राणा ।
मुख्यतः पिसाबबाट प्रोटिन जाने समस्याले धेरैजसाको मिर्गौला बिग्रेको पाइएको छ । अझ त्यसमा खानपानको असन्तुलन, कसरतको अभाव लगायतका कुराले पनि अशर गरेको पाइएको छ ।
अहिले नेपालमा मिर्गौलाको उपचार सहजरुपमा गर्न सकिन्छ । खासमा मिर्गौला बिग्रेपछि त्यसको उपयुक्त उपचार भनेको प्रत्यारोपण नै हो । डायलासिस अस्थायी समाधान मात्र हो । यो खर्चिलो पनि हुन्छ, यद्यपी सरकारले केही सहुलियत दिएको छ, तर त्यसले पुग्दैन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको मिर्गौलाको उपचार गर्नुभन्दा पनि मिर्गौलामा समस्या नै आउन नदिनु ठूलो कुरा हो । यसका लागि बेलाबेलामा पिसाब र रगतको जाँच गराउनुपर्छ । सरकारी मात्र होइन निजी अस्पतालमा पनि ५० रुपैयाँदेखि डेढसय रुपैयाँमा यसको जाँच हुन्छ । आफनो स्वास्थ्यको लागि यति जाँच गर्नु अनिवार्य छ ।
डा. राणा भन्छन्, ‘ हामी नेपालीहरु अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल जाने गरेका छौं । लक्षण कुरेर बस्ने होइन । लक्षण देखिदासम्म त मिर्गौला ९० प्रतिसत बिग्रिसकेको हुन्छ । नियमित परीक्षण गर्न कसैले अल्छी गर्नु हुँदैन । ’
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक प्रत्यारोपण सफल भएको छ । उहाँको नयाँ मिगौलाले लामो समय काम गर्ने लगभग पक्का छ । केही जटिलता आउन सक्छन् तर नियमितरुपमा चिकित्सकको निगरानी र परामर्शमा रहे समस्या आउँदैन । अलिकति आफनो खानपान र जीवनशैलीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
डा. राणाका अनुसार अहिले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणप्रति जति चर्चा छ त्यो भन्दा बढी गम्भीर विषय मिर्गौला पनि हो । कोरोना संक्रमणका विषयमा सतर्कता अपनाउनु ठीकै हो तर त्रास बढी फैलाइएको छ । यो सबै सामाजिक संजाल र संचारमाध्यमको प्रभाव हो ।
कोरोना संक्रमण नहोस भन्नका लागि खासै नयाँ विशेष केही गर्नुपर्दैन । सरसफाइमा ध्यान दिने, हात धोइराख्ने, मास्क लगाउने आदि आदि... । यी कुरा अरु बेलामा पनि गर्नुपर्छ । यसले अरु रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ । यसका विषयमा धैरै त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
अहिले नेपालमा ‘फिटनेस’ को नाममा ‘डाइटिङ’ को लहर चलेको छ । यो खतरनाक छ । ‘डाइटिङ’ को नाममा खाना नखादा शरीरमा आवश्यक पोषण नपुग्ने खतरा हुन्छ । देखावटीरुपमा शरीर राम्रो बनाउने भन्दै खाना छोड्दा शरीरका महत्वपूर्ण अंग कमजोर हुन सक्छन् । यसले शरीरको ‘इम्युनिटी पावर’ घटाउँछ । ‘इम्युनिटी’ नहुँदा रोगले आक्रमण गर्छ । ‘इम्युनिटी’ बढाउन माछामासु, दूध, दही, घिउ, फलफुल लगायतका कुरा खान जरुरी छ ।